TopVPN.Review - စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံး VPN များသုံးသပ်ချက်များ
စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံး VPN များသုံးသပ်ချက်များ
Astrill VPN ကို
Mullvad VPN ကို
TorGuard VPN ကို
Mac အတွက် VPN များ
Android VPN များ
Kodi များအတွက် VPN ကို
အတွက် VPN များ Netflix
Torrenting အတွက် VPN
Kodi ကို update လုပ်ပါ
7 အတွက် Torrenting အတွက် 2020 အကောင်းဆုံး VPN; စမ်းသပ်ပြီး (100% Safe)
အဲလက်စ် Mason ဆို မေလ 5, 2020 မေလ 5, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ7အတွက် Torrenting အတွက်အကောင်းဆုံး VPN 2020 ခု၊ စမ်းသပ်ပြီး (100% Safe)
VPN မပါဘဲ torrenting လား? သတင်းမကြားဘူးလား torrent ဖမ်းမိခြင်းအတွက်ကြီးမားသောပြစ်ဒဏ်များရှိသည်။ torrent client ကိုအသုံးပြုနေစဉ် VPN သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်လုံခြုံရေးကိရိယာကိုမဆိုမသုံးခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဖက်ဒရယ်ပြစ်ဒဏ်များ၊
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်အောင်မြင်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကမင်းကိုထောင်ချစေနိုင်တယ်။ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဟာတရားဥပဒေရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်သွားပြီလား။ ကောင်းပြီ, VPN များသည်လိုအပ်သောအကာအကွယ်ကိုပေးသည်။ ဘယ်လိုကာကွယ်မှုမျိုးလဲ။
tor သည် torrent သည်တရားဝင်သို့မဟုတ်တင်းကျပ်သောဥပဒေများရှိသောတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့ VPN တစ်ခုကသင်၏ IP ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ (ဆွစ်ဇာလန်)
VPN သည်သင်၏အင်တာနက်အသွားအလာကိုသင်၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှဝှက်ထားပါသည်
VPN အားလုံးသည်အတူတူပင်ပြုလုပ်ကြသောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဤစာရင်းကိုဖတ်ရန်ပင်အနှောင့်အယှက်ပေးသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော့်ရဲ့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သူများသည် VPNs အားလုံးသည်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာလုပ်ဆောင်ကြသောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်တန်းတူမဟုတ်ပါ။ အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ ကောင်းပြီးအင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများပိုပေးသည်။
ဒီတော့ဒီမှာငါတို့မှာ torrent အမြန်နှုန်းကိုအကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံး VPNs အနည်းငယ်ရှိသည်။ သင့်အားအစိုးရယောက်ျားများအားသင့်ကိုရှာခွင့်မပြုပါ။ စကြစို့လား၊
Kodi အတွက်7အကောင်းဆုံး VPN; 2020 ၏ Safe & Super Fast VPNs
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 31, 2020 မတ်လ 31, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ Kodi အတွက်7အကောင်းဆုံး VPN; 2020 ၏ Safe & Super Fast VPNs
ဘယ်သူကရုပ်ရှင်ရုံကိုမကြိုက်ဘူးလဲ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့တွေအားလုံးလုပ်ကြပေမယ့်ရုပ်ရှင်တွေကမကြာခဏစျေးကြီးတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးမီဒီယာစီးဆင်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းသို့ ဝင်ရောက်၍ ပြဇာတ်ရုံအတွေ့အကြုံကိုသင်၏ room ည့်ခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သော Kodi ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာကကောင်းတာပေါ့။
ဒီအင်တာနက်ခေတ်မှာနယ်စပ်ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်လာတယ်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လုံခြုံမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲအမျိုးမျိုးသောဖျော်ဖြေရေးနေရာများတွင်ပျော်မွေ့ရန်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကွန်ယက်များသို့ ၀ င်ရောက်ရန် ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာသည်။
အချို့သောနေရာများတွင်တားမြစ်ထားသောအချို့နိုင်ငံများတွင်ဆင်ဆာဥပဒေများလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Kodi ကဲ့သို့မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုသင်ကန့်သတ်ထားသောဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည့်အကောင်းဆုံး VPN ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စာရင်းဖြင့်စတင်ခြင်း…
7 CouchTuner ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရွေးချယ်စရာများ (ရုပ်ရှင်များအခမဲ့ထုတ်လွှင့်ရန်)
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 20, 2020 မေလ 4, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ7အပေါ် CouchTuner ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရွေးချယ်စရာများ (ရုပ်ရှင်များအခမဲ့ထုတ်လွှင့်ရန်)
CouchTuner တီဗွီအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်ရန်အစက်အပြောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုဒ်သည်ပျက်နေပြီသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာမျှမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်နည်းနည်းလွန်စွာအသုံးများလာပြီးစိတ်ပျက်စရာကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Play ခလုတ်ကိုအလိုအလျောက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် tab သည်ဖွင့်သည်သို့မဟုတ်သင်ပိုငွေရှာမည်၊ သို့မဟုတ်သင့်အဆီအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်ဟုဆိုသောကြော်ငြာကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။
သင့်ကိုစွန့်ပစ်ရန်သင့်အားမပြောပါ CouchTuner အားလုံးပေမယ့်လက်မှာကောင်းသောရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သတိထားဖြစ်ခြင်းအမြဲကြီးလှ၏။ ဒီမှာဆင်တူသောဆိုဒ်အနည်းငယ်ရှိသည် CouchTuner ကြော်ငြာများနှင့် / သို့မဟုတ်တီဗွီအစီအစဉ်များအတွက်သာဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ အတွက်အကောင်းဆုံး Android VPNs (စမ်းသပ်ပြီး)
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 14, 2020 မတ်လ 14, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ5အတွက်အကောင်းဆုံး Android VPN ၅ ခု (စမ်းသပ်ပြီး)
2019 ၏အဖြစ်, Android ဟာလူသုံးအများဆုံးမိုဘိုင်း OS ပဲ မိုဘိုင်းမှလာသူ ၅.၁ ဘီလီယံသုံးစွဲသူအမြောက်အများကို Linux ၏လက်အောက်စနစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကွန်ပျူတာများသည်အစဉ်အဆက်နှစ်သက်ဆုံးသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်းမိုဘိုင်းသည်ပုံစံကို အခြေခံ၍ အင်တာနက်ကိုလူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။
ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအလွန်များပြားလာခြင်းကြောင့်မိုဘိုင်း (အထူးသဖြင့် android) သည်ကွန်ပြူတာများကဲ့သို့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုလိုအပ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါး၌ Android ကိုအလေးထားသည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာမှုနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏သဘောသဘာဝ။
ထို့ကြောင့်အများပြည်သူသုံး WiFi နေရာ၌အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုမြင့်မားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ site တစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကဲ့သို့ဖုန်းတစ်လုံးတွင်အားနည်းချက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်လုံခြုံစွာကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံး VPN ၅ ခုစာရင်းပြုစုထားသည်။
ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန် FMovies များနှင့်ဆင်တူသည့်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 14, 2020 မတ်လ 14, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန် FMovies များနှင့်ဆင်တူသည့်အကောင်းဆုံးဆိုဒ် ၆ ခု
Fmovies သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဝီကီပီးဒီးယားကြည့်ရှုခြင်း၊ လွှင့်ခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားအကန့်အသတ်မရှိသောရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များစွာ) ။ ရုပ်ရှင်များကိုအမျိုးအစားအလိုက်၊ ထိပ်တန်းအဆင့်၊ အက္ခရာစဉ်အလိုက်ရှာနိုင်သည်၊ သင်၏တိုင်းပြည်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုပင်ရှာနိုင်သည်။
လက်ျာအသံ, အသံ? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကဲ့သို့ Fmovies သည်ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်ငွေရှာသည်။ ဆိုက်သည်လုံးဝအသုံးမ ၀ င်နိုင်သော်လည်းဆိုက်ကို ဖြတ်၍ ကြည့်ရှုခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အထိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 'ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ' gimmicks များထဲမှတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သင့်အား site မှသင့်ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည်။
ဒီတော့ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။ အခမဲ့ streaming များပေးသောအခြားဆိုဒ်များရှိပါသလား။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Fmovies သည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးမဟုတ်ပါ။ Fmovies နှင့်ဆင်တူသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုပေးသော်လည်းအခြားကြော်ငြာများမရှိသောအခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။ သင်မေးသောဤဆိုဒ်များကဘာတွေလဲ။ သူတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်:
9 အကောင်းဆုံး VPN များ Netflix: စမ်းသပ်ပြီး; လုံခြုံစိတ်ချရသော (၂၀၂၀)
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 6, 2020 မတ်လ 28, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ များအတွက်9အကောင်းဆုံး VPNs ပေါ်မှာ Netflix: စမ်းသပ်ပြီး; လုံခြုံစိတ်ချရသော (၂၀၂၀)
ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်ရှုပြီးသောအချိန်တွင်chရာမလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သောမီဒီယာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏တနင်္ဂနွေတွင်အေးခဲနေသောတနင်္ဂနွေနှင့်ပေါင်းသင်းလေ့ရှိသည်။ Netflix, အခြားမှတ်တိုင်, အောင်မြင်မှုကျော်အနည်းငယ်အနည်းငယ်အားဖြင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းတိုးမြှင့်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။
ကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါင် Netflix ယခုပရီမီယံဖျော်ဖြေရေး၏အထွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောင်းအားအားလုံးမီဒီယာအားလုံးအဆုံးသတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်အခါပြန်စဉ်, streaming ကိုဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရရှိရန်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်, Netflix အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တော်မူ၏။
AirVPN ပြန်လည်သုံးသပ် - ဤ VPN သည်အသက်ရှူရန်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။ ရှာကြစို့…
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 6, 2020 မတ်လ 6, 2020 ဟာ Off comments on AirVPN ပြန်လည်သုံးသပ် - ဤ VPN သည်အသက်ရှူရန်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။ ရှာကြစို့…
AirVPN ယခုနှစ်တွင်သူ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။
တကယ်တော့, AirVPN အွန်လိုင်းတည်ထောင်ခြင်းကိုဂရုစိုက်ပြီးအခြားလုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်မြှင့်တင်ပေးနေသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်ဟက်ကာများ၏ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲသည်။
ဒါပေမဲ့မင်းကောင်းလား။ အဲဒါအရူးလား၊ သုံးရတာခက်လား။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်နေပါကအဘယ်ကြောင့်သင် ပိုမို၍ မကြားဖူးသနည်း။
ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခဲ့တယ် AirVPN နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်၎င်းအကြောင်းပြောစရာများစွာရှိသည်။
9 အကောင်းဆုံး ExtraTorrent ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်စရာများ (အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်)
အဲလက်စ် Mason ဆို မတ်လ 3, 2020 မတ်လ 14, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ9အကောင်းဆုံး ExtraTorrent ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်စရာများ (အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်)
လူရွှင်တော်ဝေါဟာရများအရ ExtraTorrentအသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အမျိုးမျိုးသောရုပ်ရှင်၊ ဂိမ်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားအရာများအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရှာဖွေရေးယန္တရား။ အကြောင်းကိုအများဆုံးထူးခြားတဲ့ feature ကို ExtraTorrent ဒါဟာသုံးစွဲသူရဲ့အခြေခံဟာကလေးငယ်တစ် ဦး မှ (ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်) ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် (အလုပ်အတွက်) အထိဖြစ်သည်။
ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များ ExtraTorrent နှင့် ThePirateBay သည် torrents များကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများအကြားတွင်လူကြိုက်များသည်။
ExtraTorrent SaM ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် SaM အမည်ဖြင့်စီမံအုပ်ချုပ်သူတစ် ဦး မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပြီးဆုံးသွားသောအခါသုံးစွဲသူများသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောရုပ်ရှင်ကားများကိုခန့်မှန်းရန်တောင်းဆိုသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
သြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံး VPN ၅ ခု - ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံမှု (၂၀၂၀)
အဲလက်စ် Mason ဆို ဖေဖေါ်ဝါရီလ 29, 2020 မတ်လ 14, 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ သြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံး VPN5ခု - ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
မြေတိမ်သောကြောင့်၊ သင်၏အင်တာနက်လုံခြုံရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုသင်စိုးရိမ်ပါသလား။ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်စိတ်ချရသော VPN များကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေပဲရှိတယ်။
Australiaစတြေးလျသည်ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ရန်အလားအလာကောင်းသည်မှာသေချာသည် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများအချက်အလက်ခိုးယူခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်မဆိုကန့်သတ်ထားသောဆိုဒ်များကိုဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကအင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ဦး စားပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်သြစတြေးလျအတွက်အလွန်ကောင်းသော VPN ၀ န်ဆောင်မှု ၅ ခုရှိသည်။
Mullvad VPN ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီအကောင်းအဆိုးအားဖတ်ပါ။
အဲလက်စ် Mason ဆို ဖေဖေါ်ဝါရီလ 29, 2020 မတ်လ 14, 2020 ဟာ Off comments on Mullvad VPN ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီအကောင်းအဆိုးအားဖတ်ပါ။
Mullvad VPN စျေးကွက်တွင်အသစ်ဝင်လာသူမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မတ်လတွင်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ ၁၁ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာနေခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံး VPN တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သောကြောင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသောဈေးကွက်တစ်ခုတွင်စီးပွားရေး၌ဆက်လက်ရှိနေသေးသလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမ ၀ င်စေရန်တားဆီးသောလေးနက်သောဒေသများတွင်မရှိခြင်းလား။
ကောင်းပြီ, ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှ Mullvad VPN၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းများစွာပြောစရာရှိသည်။
123 ...5နောက်တစ်ခု "
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် VPN များကိုနည်းပညာစိတ်အားထက်သန်စွာစမ်းသပ်သူစိတ်ဓာတ်ရေးရာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပြောစရာမလိုတော့ဘူး, ငါတို့ပြန်လည်သုံးသပ်အားလုံးစစ်မှန်, ဘက်မလိုက်နှင့်ရိုးသားဖြစ်ကြသည်။
သင်၏ VPN ကိုတင်ပါ
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Trial VPN ၁၆ ခု - အသုံးမပြုဘဲစမ်းကြည့်ပါ။
8 ၏အကောင်းဆုံးမသိသော Torrent ဆိုဒ်များ
၂၀၂၀ အတွက်ဆိုက်ဘာလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ - ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့် ပိုမို၍!
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ chat, မှပံ့ပိုးသည် LiveChat